Shiinaha oo Ammaan ah, lagu kalsoonaan karo oo Fudud si loo rakibo Warshadaha Guddiyada Elevator Door | Tianhongyi
Qaybaha albaabka wiishka ee Tianhongyi waxay u qaybsan yihiin albaabada soo degaya iyo albaabada baabuurka. Kuwa laga arki karo wiishka dibaddiisa oo dabaq walba lagu dhejiyo waxaa la yiraahdaa albaabada soo degaya. Waxaa lagu magacaabaa albaabka baabuurka.
Qaybaha albaabka wiishka ee Tianhongyi waxay u qaybsan yihiin albaabada soo degaya iyo albaabada baabuurka. Kuwa laga arki karo wiishka dibaddiisa oo dabaq walba lagu dhejiyo waxaa la yiraahdaa albaabada soo degaya. Waxaa lagu magacaabaa albaabka baabuurka. Furitaanka iyo xiritaanka albaabka soo -dejinta wiishka waxaa garwaaqsaday furitaanka albaabka ee lagu rakibay albaabka gaariga. Albaab kasta oo dabaq ah waxaa lagu qalabeeyay quful albaab. Ka dib marka albaabka soo degaya la xiro, jillaab qufulka farsamada ee qufulka albaabka ayaa ku lug leh, isla markaasna albaabka soo degaya iyo albaabka baabuurka ee xiriirinta korontada ayaa xiran, iyo wareegga koontaroolka wiishka ayaa ku xiran, markaas wiishku wuxuu bilaabi karaa inuu ordo. Bedelka badbaadada albaabka baabuurku wuxuu hubin karaa in wiishku uusan si caadi ah u shaqayn karin marka albaabku uusan si ammaan ah u xirnayn meesha ama uusan xirnayn. Albaabka soo degaya guud ahaan wuxuu ka kooban yahay albaabka, qaabka tareenka hagaha, miyuusigga, sagxadda lagu simo, daboolka albaabka, sill -ka iyo qaybaha kale. Waxaan ka dhigeynaa sida uu qabo soo saaraha albaabka, ballaca albaabka albaabka, dhererka guddaha albaabka, iyo alaabta guddiga albaabka ee uu bixiyay macmiilku. Waxaan sidoo kale samayn karnaa naqshado cusub marka loo eego sawirradaada. Hababka furitaanka albaabka ugu weyn waa: kala -goynta dhexe, dhinaca laba laab -laab, laab -laab laba -laab, iwm Waxa ugu badan waa kala -gooynta xarunta, ballaca furitaanka waa 700 ~ 1100mm, iyo Dhererka furitaanka waa 2000 ~ 2400mm. Waxaan bixin karnaa midabyo kala duwan: rinjiga, birta aan birta lahayn, muraayadda, dhejinta, dahabka titanium, dahabka kacay, titanium madow, iwm. albaabka si loo hubiyo xooggiisa, cimri dhererkiisa iyo nabadgelyadiisa. Daboolka albaabka wiishka waxaa loo qaybiyaa daboollada albaabka yar iyo daboollada albaabka waaweyn. Guud ahaan, daboolka albaabka yar waa in lagu daraa heerka warshadda. Daboolka albaabkan waxaa loo rakibay si loo daboolo farqiga u dhexeeya baabuurka wiishka iyo derbiga dibadda iyo si loo qurxiyo qolka wiishka. Waxaa guud ahaan laga sameeyaa bir bir ah. Daboolka albaabku waa nooc cusub oo ah daboolka albaabka qurxinta wiishka. Waxaa laga sameeyay agabyo kala duwan, ma aha oo kaliya birta birta ah, laakiin agabyo kale oo leh qaabab dhagaxa ku dayashada ayaa sidoo kale la heli karaa; oo ay ku jiraan zinc-steel daboolka albaabka isku dhafan, daboolka albaabka caagga ah ee nano-dhagax iyo wixii la mid ah. Dhinac, waxay kaalin ka qaadan kartaa qurxinta wiishka, dhinaca kalena, waxay ka soo kaban kartaa dhibaatooyinkii ku haray hannaanka dhismaha madaniga ah; tusaale ahaan, haddii masaafada u dhexeysa derbiga iyo jirridda albaabka wiishka yar ay weyn tahay, waxay u baahan tahay in lagu qurxiyo daboolka albaabka.
1. Iska-caabbinta Saameynta: Albaabka baabuurka wiishka waxaa looga baahan yahay inuu ahaado inta u dhexeysa 5cm*5cm ee "GB7588-2003", oo leh awood ma guurto ah oo ah 300N iyo xoog saameyn ku leh 1000N (qiyaas ahaan waxay la mid tahay xoogga uu qof weyn oo caadi ahi dadaalaa, sidaa darteed waxaa loo adeegsadaa sida wiishka Daboolka albaabku waa inuu lahaadaa isla heerka saamaynta iska caabinta si looga hortago waxyeellada iyo shilalka ay sababaan walxaha culus, baabuurta korontada, baaskiilada, iwm marka la galayo ama laga baxayo wiishka).
2. Biyo -xireenka iyo dab -damiyaha: Wiishku waa qalab gaar ah. Wiishka lama oggola in la isticmaalo haddii dab qabsado. Si kastaba ha ahaatee, oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah hoolka jaranjarada, daboolka albaabka wiishka waa inuu buuxiyaa shuruudaha dab -damiyaha dabka (V0 ama kor) si loo hagaajiyo heerka guud ee ilaalinta Dabka; isla sababtan awgeed, haddii ay la kulanto jawi qoyan ama ay dillaacdo, waa in lagu qooyay biyo 24 saacadood iyada oo aan la beddelin ama la dillaacin, si kor loogu qaado ammaanka guud ahaan deegaanka.
3. Badbaadada: Maadaama ay tahay meel dadku ku badan yihiin oo ka baxsan goobaha dadweynaha, nabadgelyadu waa mudnaanta koowaad. Daboolka albaabka wiishka waa inuu awood u yeeshaa inuu dillaaco oo waxyeello gaaro ka dib markii ay ku dhufteen xoog wax burburiya oo aan lahayn khataro badbaado, oo uusan waligiis dhicin si uusan halis u gelin ama u dhaawicin nafta iyo hantida.
4. Nolosha Adeegga: Goob dadweyne ahaan, waxaa jira dad/alaabo badan oo soo gala kana baxa wiishka maalin walba, taas oo dhaawac weyn iyo isku dhac ku keeni doonta daboolka albaabka wiishka. Mawduuca daboolka albaabka wiishka wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo heerar sare si loo kordhiyo noloshiisa adeegga. Nolosha adeegga wiishka ma aha wax ka yar 16 sano. Iyada oo qayb ka ah daboolka albaabka, waa in la adeegsadaa ilaa wiishka.
5. Ilaalinta deegaanka: Aagga daboolka albaabka wiishku waa yar yahay, laakiin tiradu aad bay u weyn tahay. Bulshada casriga ah ee ay ilaalinta deegaanku tahay dulucda, waa inaan ku baaqnaa in dhinacyo badan loo adeegsado agabka bay'ada u fiican. Ku biir wabiyada waaweyn iyo buuraha dhulka hooyo iyo dunida cagaaran.
6. Geedi socod fudud: Sababtoo ah qiimaha shaqaalaha oo sii kordhaya awgood, dhismayaal kala duwan oo degdeg ah, alaab guri iyo daboolida albaabka wiishka ayaa la raray, taas oo aan badbaadinayn kaliya saacadaha shaqada iyo kharashka shaqada, laakiin sidoo kale hoos u dhigaya hababka si waafaqsan, si loo gaaro hufnaan sare iyo hufnaan shaqo oo tamar-badbaadin ah. La qabsado shuruudaha bulshada casriga ah.
Kaydinta alaabta iyo gaadiidka
Hore: Wiishka Xamuulka Rakaabka ee Xamuulka ah ee Asynchronous
Xiga: Wiishka Raadinta Rakaabka ee Mashiinka Qol La'aan
Albaabada wiishka ee otomaatiga ah
Wiishka Albaabka Labaad
Wiishka Door Jamb
Hawlwadeenka Albaabka Wiishka
Wiishash Door Wiishka